Articles | Filmy Bazar in Nepal | Page 2
बि.स.२०७१ लाई फर्केर हेर्दा
विजयरत्न, चैत्र २८ । वर्षमा एकसयको हाराहारीमा चलचित्र रिलिज हुनु भनेको अहिले सामान्य कुरा हुन थालिसकेको छ । वि.सं. २०७० मा यो संख्या सय नाघेको थियो भने यो वर्ष झण्डै झण्डै सयको नजिक पुगेको छ । अर्थात् वर्षको अन्तिम साता प्रदर्शनमा आएको सेतो बाघ, हवल्दार सुन्तली र नाईं नभन्नु ल ३ सम्मको संख्या जोड्दा कूल पचासीको संख्यामा पुगेको छ यो ...	Read More »
हामी किन पछाडि परिरहेका छौँ ?
विकास राज न्यौपाने,अमेरिका वर्षेनी बग्रेल्ती उत्पादन भए पनि नेपाली सिनेमाले आफ्नो स्तर उकास्न सकिरहेको छैन । हजारौँको संख्यामा पुगिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटै सिनेमा बनेको पाइँदैन । हिन्दी सिनेमाको सिको गरेर सुरु भएको र अध्यावधि सोही परम्परा धानिरहेको नेपाली सिनेमा हिन्दी सिनेमाको तुलनामा समेत कताकता पछाडि छ । यसको कारण के हो हामी किन पछाडि परिरहेका छौँ ? सिनेमा व्यवसायमा ...	Read More »
साभार । उत्तेजक प्रस्तुतीकै कारण पलायन भएका नेपाली नायिकाहरु (पूर्ण पाठ)
January 7, 2015	Comments Off on साभार । उत्तेजक प्रस्तुतीकै कारण पलायन भएका नेपाली नायिकाहरु (पूर्ण पाठ)
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित गोकर्ण गौतमको लेख,२०७१ पौष २३ बुधबार । चार वर्षअगाडि दुलहीबाट सोझी युवतीको भूमिकामा फिल्मी यात्रा सुरु गरेकी हिरोइन हुन्, सुमिना घिमिरे। तर, यो फिल्मले उनलाई पर्याप्त चर्चा दिलाएन। रातारात हिट हुने लोभमा अंग प्रदर्शनको बाटो रोजिन्। स्टार, लभ फरेभर, नाइन ओ क्लक, अप्रिल फुल लगायत फिल्ममा छोटा लुगा लगाएर कामुक अवतारमा देखिने प्रयास गरिन्। दुर्भाग्य, यी फिल्मले ...	Read More »
नारायण गोपाल बिनाको गीत
December 4, 2014	Comments Off on नारायण गोपाल बिनाको गीत
विजयरत्न तुलाधर,२०७१ मंसिर १८ बिहिबार। नारायण गोपाल संगीतका अजर अमर साधक हुन् । नेपालको संगीत क्षेत्रलाई सयौंको संख्यामा संगीत माधुर्यको भण्डार सुम्पेर गएका नारायण गोपालको जन्म १९९६ असोज १८ गते भएको थियो । बुबा आशागोपाल गुरुवाचार्य र आमा राममाया गुरुवाचार्यका नौ सन्तान मध्येका माहिलो सन्तान हुन्, नारायण गोपाल । आफ्नो परिवारमा माहिलो भएर जन्मिए पनि उनी सङ्गीत क्षेत्रमा संधैं अब्बल ...	Read More »
नेवाःफिल्मको लेखा जोखा
October 23, 2014	Comments Off on नेवाःफिल्मको लेखा जोखा
-विजयरत्न,२०७१ कार्तिक ६ बिहिबार,काठमाण्डौ । नेपाल सम्बत ११३५ नयाँ वर्ष (न्हूदँ) मनाउने क्रममा नेपाल भाषाका चलचित्रहरुको वस्तुस्थितिबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । त्यसैले यहाँ नेपाल भाषा अर्थात नेवाः फिल्महरुकोबारे चर्चा गर्ने प्रयास गर्न लागिएको छ । नेपाल भाषामा कुनै बेला वर्षको दस बा¥हवटासम्म पनि फिल्महरु बनेका थिए । तर अहिले भने यो संख्या दिनानुदिन घट्दै गईरहेको छ । नेवाः ...	Read More »
श्वेतालाई मेनुकाको खुल्ला पत्र
September 17, 2014	Comments Off on श्वेतालाई मेनुकाको खुल्ला पत्र
फिल्मीबजार,२०७१ असोज १ बुधबार,काठमाण्डौ । -मेनुका थापा (अध्यक्ष रक्षा नेपाल) प्रिय बहिनी स्वेता, ‘बिहान बिहानै अनलाइनमार्फत श्रीकृष्णको उपचारको क्रममा निधन भन्ने समाचार पढेदेखि खल्बलिएको यो मन आजसम्म स्थिर भएको छैन भने तिम्रो मनभित्रको भुइँचालो, एक्लोपन, नैराश्यता र रोदन मैले अनुमान लगाउन सक्छु । मृत्यू निश्चित छ, तर यो निश्चिततालाई, यो सत्यतालाई मान्छेले सजिलै आत्मबोध गर्न सक्दैन । यो तिम्रो वा ...	Read More »
बक्स अफिसमा बखेडा (पूर्ण पाठ)
September 3, 2014	Comments Off on बक्स अफिसमा बखेडा (पूर्ण पाठ)
‘बक्स अफिस भनेको सिस्टम मात्र हो । मान्छे यिनै हुन्, त्यसैले तलमाथि गर्न खोज्ने नै हो भने रोक्न सकिन्न ।‘ ‘बक्स अफिसको साँचो फेरि वितरक र प्रदर्शकलाई नै दिएपछि गोलमाल नहोला भन्ने आधार के हो ?’ भाद्र १८ । चलचित्र विकास बोर्डको रोहबरमा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने औपचारकि सहमति भएको सात महिना बित्यो। लामो ...	Read More »
पर्दामा तीजको लहर
August 26, 2014	Comments Off on पर्दामा तीजको लहर
विजयरत्न तुलाधर,२०७१ भाद्र १० मंगलवार । “रङ्ग बैजनी” चलचित्रमा एउटा तीज गीत रहेको र त्यो गीतमा दुई नायिकाहरु गरिमा पन्त र सुमिना घिमिरेको तीज दोहोरी चलेको हेर्न पाइने कुरा अहिले चर्चाको विषय बनिरहेको छ । चलचित्रको पर्दामा तीजका प्रसङ्गहरु र गीतका कुरा आउँदा अगाडि आउने गीत भनेको “तीजको लहर आयो बरी लै”—बोलको गीत हो । “कन्यादान” चलचित्रको यो गीत करीब ...	Read More »
चलचित्रको गीतमा कमेडी
August 9, 2014	Comments Off on चलचित्रको गीतमा कमेडी
विजयरत्न, २०७१ साउन २३ शुक्रबार,काठमाण्डौ । “बम भोले बम बम भोले, साग र सिस्नु कोदो झोले, जीवन भो झोले” यो गीत हो चलचित्र “झोले” को । यो चलचित्रका निर्देशक दीपेन्द्र के.खनाल हुन् । र “झोले” लाई नेपाली चलचित्रवृत्तमा डार्क कमेडी अर्थात गहिरो कटाक्ष प्रहार गरिएको हास्यप्रधान चलचित्रको रुपमा चर्चा गरिएको थियो । यो चलचित्रको प्रस्तुत गीतमा देशको राजनीति लगायत सामाजिक ...	Read More »
ध्वनिविहिन राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार
July 4, 2014	Comments Off on ध्वनिविहिन राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार
-विजयरत्न /२० असार,शुक्रबार,काठ्माण्डौ । चलचित्र भन्नाले त्यो चित्र चलाएमान हुनुपर्छ । त्यसमा ध्वनि ९कयगलम० हुनुपर्छ । अर्थात त्यो फोटो वा फिल्म मुभि वा सिनेमा हुनकालागि फोटो वा फ्रेम स्थीर हुनुहुँदैन । गतिशिल हुनुपर्छ । र गतिशिल गर्ने काम छायांकारले गर्छ भने ध्वनि अङ्कनको काम साउण्ड टेक्निशियनले गर्छ । ध्वनि पनि नभएको अनि गतिशिल पनि नभएको चित्र वा तस्वीरलाई मूभि ,सिनेमा ...	Read More »